Home » Aha! Jokes, Satire » သဒင်းအစုန်အလိင်မှာ… Air
အပေါ်ဟာတွေက အတီ.. ဂုဟာဂ အပြောင်အပျပ်.. … …..
ခြေဥ ပြင်ဆင်ရေး ကြိုးဗန်းချက် လွှတ်တော်ဒွင်း မအောင်မမြင် ဖြစ်ပီးနောက် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို နှစ်သိမ့်ရန်၊ ဒီချုပ်နှင့် မပေါင်းမိစေယံ စစ်တဗိုင်းအစိုးမရနှင့် မဲခိုးဖွတ်လွှတ်တော်မှ ပြည်နယ်တိုင်းမြှားတွင် ကိုယ်ဗိုင်ဝံဂျီးချုပ်နှင့် ဥပဒေ ပြဌာန်းခွင့် ညှိနှိုင်းပေးဖွယ် ရှိနေသီ။
စောစေ စီးးစီးးးရီ လိုက် ရတာအေ..!!
အူးကြောင့် လက်ရာ ဒါမျိုးစာ မဖတ်ရတာကြာ. . .
. အောက်ဆုံး က အပြောင်အပျက်
ကြံဖွတ်ပါတီကိုမဲပေးယင် လင်တူချင်းလက်ထပ်ခွင့်ပေးမည်ဆိုချင်းကြောင်..နတ်ကတော်များ နှင့်ရွာထဲမှ မိုးမင်းသားတို့အဖွဲ့မှအားတဲ့သရောဖွတ်မဲများရရန်စည်းရုံးဘို့ကျိုးစားနေကြခြင်း…..လစ်ပြီဝှီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ခြေဥမပြင်ရန် လွှတ်တော်မှ မဲခွဲစုန်းဖျက်ပီးနောက် ဖက်ဆစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ် အဆိပ်သားမှ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး ကြဂျင်းမှာ အောင်ဗွဲခံခြင်း မှုတ်ပဲ ခြင်ကိုက်၍ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကြက်မရေးရာကော်မတီမှ ဖြေရှင်းသီ။( ခြင်ဆေးခွေသွားရောင်းအုံးမှဗဲ :))
NLD မှ IS ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်.. ကြောင်ကြီးကို ရွေးချယ်ထားသီ…
ကြောင်ကြီးးဒါမျုိးတွေရေးနေတာ လုပ်ကြံ ခံရမှာ မစိုးရိမ်ဘူးလား
“ရှစ်ပွကြီး”တို့အုပ်စုမှ ဒေါ်စုအားမကြေမနပ်ဖြစ်ကြခြင်းမှာ ၂၀၁၂ ရွေးဂေါက်ပွဲအား သူတို့အားမတိုင်ပင်ပဲ… ၀င်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပြီး..
“စစ်ပွကြီး”တို့အုပ်စုမှ.. ခြေဥမပြင်ပေးခြင်းမှာလည်း.. ဒီချုပ်မှ အမျိုးသားညီလာခံမှ ကောက်ကာငင်ကာ နှုတ်ထွက်သွားခြင်းကို ပညာပေးနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း… ခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်မှ … စိုသည်။…